အာဖရိက၏သူမတူနိုင်တဲ့အလှတရားရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်အပါအဝင်ယခုတိုင်အောင် unexplored နိုင်ငံများတွင်သွားရောက်မကြာသေးမီဆယ်စုနှစ်များတွင် ပို. ပို. ခရီးသွားဧည့်စိတ်အားထက်သန် အီသီယိုးပီး ။ အလွန်မြင့်မားသောအဆင့်ဟိုတယ်အတွက်တတ်နိုင်သမျှတိုင်းပြည်ရန်သင့်ခရီးစဉ်အတွင်းနေထိုင်နိုင်ရန်, အဓိကအားဖြင့်တည်ရှိသော Addis Ababa အဖြစ်သင်သာကြွင်းသောအရာများအတွက်အကြွင်းမဲ့အာဏာနိမ့်ဆုံးပေးရရှိရာအသေးစားနှင့်ကျိုးနွံဧည့်သည်-အိမ်များအတွက်။
အီသီယိုးပီးခုနှစ်တွင်နိုင်ငံပိုင်ဟိုတယ်များရှိပါတယ်။ သူတို့ဟာအဓိကအားဖြင့်အရာရှိများနှင့်စစ်တပ်၏ချထားပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောဟိုတယ်များအတွက်နေဖို့လိုသည့်နိုင်ငံခြားခရီးသွားဧည့်ဒေသခံတွေ (တစ်ခါတစ်ရံအထိသုံးကြိမ်) ထက်သိသိသာသာပိုပြီးပေးဆောင်ရပါလိမ့်မယ်။ စျေးနှုန်းတွေကအမြဲဟိုတယ်များ၏အဆင့်နှင့်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်န်ဆောင်မှုများ၏အရည်အသွေးရောင်ပြန်ဟပ်ပါဘူးနေစဉ်။ အီသီယိုးပီးပုဂ္ဂလိကဟိုတယ်, ယေဘုယျအားဖြင့်သန့်စင်အသစ်များနှင့်စျေးနှုန်းချိုသာအများပြည်သူအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်ကြသည်။
ဟိုတယ်များ၏အကျယ်ဆုံးရွေးချယ်မှု - မြို့တော်၌တည်၏။ အများစုမှာမကြာခဏခရီးသွားဧည့် Piazza (Piazza) ၏ဧရိယာ၌ရပ်တန့်။ Mid-range ကိုဟိုတယ် (ပုဂ္ဂလိကအဆောက်အဦနှင့်အတူနှစ်ဆအခန်းထဲမှာတက်သည်မှ $ 20) တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ အဲသယောပိမြို့တော်များတွင်မရှိသလောက်ခရီးသွားဇုန်ပြင်ပရှိအသေးစားမြို့များမဟုတ်သောအရာ, ရေနှင့်လျှပ်စစ်မီးပြဿနာရှိသည်။
ဟိုတယ်တိုင်းပြည်လုံးကိုအဓိကမြို့ကြီးများအတွက်အလွန်ကောင်းသောအဆင့်အထိရှိသည် - အတွက် Lalibela , Gondar , Bahir Dar ။ သေးငယ်မြို့, သင်သည်မကြာခဏ Spartan အခြေအနေများနှင့်အတူတစ်တည်းခိုခန်းပူဇော်မှသာအိပ်စက်ခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သင့်လျော်သောနှင့် uncharted အီသီယိုးပီးအောင်နိုင်မှပေါ်မသွားနိုင်ပါလိမ့်မည်။
ဟိုတယ်5*
Marriott ဟာဒီအမှုမပေါ်အလုပ်အမှုဆောင်တိုက်ခန်း (Addis Ababa) ။ ဤသည်နေအိမ်သို့အမျိုးသားနန်းတော်ကနေ UNECA ညီလာခံစင်တာမှ 500 မီတာနဲ့ 1 ကီလိုမီတာအကွာတွင်တည်ရှိသည်။ အခန်းပေါင်းလည်း, တီဗီ, မီးဖိုနှင့်အတူမီးဖိုချောင်, မိုက်ခရိုဝေ့, ရေခဲသေတ္တာ, ရေနွေးအိုးနှင့်ပေါင်မုန့်ကင်ရာမီးဖိုကလေးနှင့်အတူတစ်ဦးထမင်းစားခန်းဧရိယာတစ်ဦးထိုင်ခုံဧရိယာများပါဝင်သည်။ ဟိုတယ်မှာ mini ကိုစျေးကွက်, စားသောက်ဆိုင်, spa, ကြံ့ခိုင်ရေးစင်တာရှိပါတယ်။ ဟိုတယ်များ၏နယ်မြေတစ်ခုလုံးတွင်အခမဲ့ Wi-Fi ကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်။
ဟိုတယ် Sheraton Addis (Addis Ababa) ။ နာမည်ကျော်အနီးတွင်တည်ရှိပြီး ၏ဆွဲဆောင်မှု Menelik II ကိုနန်းတော်ရဲ့နန်းတော်က The ECA ညီလာခံစင်တာ, Addis Ababa အားကစားကွင်း, အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်များနှင့် - အဲသယောပိမြို့တော် သန့်ရှင်းသောဘုရားသုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူ၏ဘုရားရှိခိုးကျောင်း ။ ဒီဟိုတယ်အခန်းများကိုသင်ဂြိုဟ်တုရုပ်မြင်သံကြား, တယ်လီဖုန်း, လုံခြုံ, minibar နှင့်ရေချိုးခန်းနဲ့ရုပ်မြင်သံကြားရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါဟိုတယ်ကို Sheraton Addis စားသောက်ဆိုင်နှင့်ဘား, အခန်းပေါင်းတွေ့ဆုံတစ်ဦးပြင်ပတွင်နှင့်ကလေးများရဲ့ရေကန်တစ်ခုစီးပွားရေးစင်တာရှိပါတယ်။ ဝန်ပိုမြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်မှခွင့်ပြုခဲ့နိုင်ပါသည်။
ဟိုတယ်ဟီလ်တန် Addis Ababa (Addis Ababa) ။ ဒါဟာအစကအရမ်းဗဟိုမြို့တော်၏အဓိကဆွဲဆောင်မှုကနေလမ်းလျှောက်အကွာအဝေးတွင်တည်ရှိသည်။ ဟိုတယ်အခြေခံအဆောက်အဦများတဲ့စားသောက်ဆိုင်တစ်ဦးကဖီး,2ဘား (ထိုရေကူးကန်မှာဧည့်ခန်းထဲမှာ), ရေကူးကန်များ (ပြင်ပနှင့်သားသမီးတို့အဘို့), ကြံ့ခိုင်ရေးစင်တာ, အလှပြင်ဆိုင်, spa, ချွေးပေါင်းအိမ်နှင့်အနှိပ်ခန်းပါဝင်သည်။ အဆိုပါဟိုတယ်ကိုအဓိကအားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလူများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲဒါကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအစည်းအဝေးများအဘို့များစွာသောအရပ်တို့ကိုအတွင်းရေးမှူးဝန်ဆောင်မှုများ, အသံ-အမြင်အာရုံပစ္စည်းကိရိယာများ, အလုပ်ညီလာခံနှင့်ပွဲခံအဆောက်အဦနှင့်အတူရှိပါသည်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအခန်းများလသာဆောင်, လေအေးပေးစက်, လုံခြုံ, ဆံပင်လေမှုတ်စက်, သန့်စင်ခန်းသုံးတစ်ရွေးချယ်ရေးနှင့်အတူရေချိုးခန်း, တယ်လီဖုန်းရှိသည်။
ဟိုတယ် Capital ကိုဟိုတယ်နှင့် Spa (Addis Ababa) ။ ဒါဟာငှါ, မြို့လယ်အနီးမှာတည်ရှိပြီး လေဆိပ် - 10 မိနစ်။ အဆိုပါအခန်းများပြားမျက်နှာပြင်ကို TV, အိမ်သာနှင့်အတူရေချိုးခန်း, တယ်လီဖုန်း, ကော်ဇောအခမဲ့ Wi-Fi ကိုရှိသည်။ အဆိုပါဟိုတယ်ကိုလည်းစျေးဆိုင်ခြောက်သွေ့သန့်ရှင်းရေး, ရေချိုးခန်းသုံးပါရှိပါတယ်။
ဟိုတယ် Ramada Addis Ababa (Addis Ababa) ။ အဲသယောပိမြို့တော်၏စိတ်နှလုံးထဲမှာ, Bol ဧရိယာ၌တည်ရှိသည်။ အားလုံးခန်း, ကောင်းစွာပရိဘောဂများနှင့်တပ်ဆင်ထားတဲ့များမှာနာရီဝန်းကျင်ဝတ်ပြုကြ၏။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဧည့်သည်များတာဝန်ခံကို Wi-Fi ကိုအခမဲ့ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။ အဆိုပါဟိုတယ်စားသောက်ဆိုင်, ဘား, ကဖေး, ကြံ့ခိုင်ရေးစင်တာရှိပါတယ်။
Babogaya Resort ဟိုတယ် (Debre Zeyit) ။ တစ်ဦးအဆင်ပြေနေဘို့ကြော့ဟိုတယ်။ အဆိုပါအခန်းများ cable သို့မဟုတ်ဂြိုဟ်တုရုပ်မြင်သံကြား, မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်, လုံခြုံ, minibar, တယ်လီဖုန်းတပ်ဆင်နေကြသည်။ Non-ဆေးလိပ်သောက်ဘို့ခန်းရှိပါတယ်။ ဟိုတယ်များ၏အခြေခံအဆောက်အဦးများဟာစီးပွားရေးစင်တာ, ညီလာခံအဆောက်အဦးများ, တစ်ဦးကစားကွင်း, ရေချိုးခန်းသုံးစက်ရုံများ, ယာဉ်ရပ်နားအဆောက်အဦများနှင့်မသန်စွမ်းလူများအတွက်လက်လှမ်းပါဝင်သည်။
ဟိုတယ်4*
ဟိုတယ်ရှိတဲ့ Radisson Blu (Addis Ababa) ။ တစ်ဦးတစ်ဦးရေချိုးခန်းသို့မဟုတ်ရေချိုးခန်းနှင့်အတူရေချိုးခန်းအခမဲ့ Wi-Fi Flat-screen ကိုတီဗီ, ရေနွေးအိုး - ဟိုတယ်များ၏ကျယ်ဝန်းအခန်းပေါင်းသငျသညျအကောင်းတစ်ကြွင်းသောအရာများအတွက်လိုအပ်သမျှရှိပါတယ်။ ဟိုတယ်ရဲ့စားသောက်ဆိုင်, ဘားနှင့် spa မှာဧည့်သည်။
ဟိုတယ်ရွှေ Tulip Addis Ababa (Addis Ababa) ။ ဒါဟာ Bole အဘိဓါန်လေဆိပ်ကနေပဲ2ကီလိုမီတာတည်ရှိသည်။ Addis Ababa တွင်ဤသူ၌ဟိုတယ်များ၏အခြေခံအဆောက်အဦးများစားသောက်ဆိုင်, ဘား, ကြံ့ခိုင်ရေးစင်တာနှင့်အခမဲ့ပုဂ္ဂလိကယာဉ်ရပ်နားပါဝင်သည်။ အဆိုပါအခန်းများကိုကောင်းစွာ (လေအေးပေးစက်, ဂြိုဟ်တုရုပ်မြင်သံကြား, Mini-bar ကို, ရေချိုး, ရေချိုးခန်း, ရေသုတ်ကုတ်အင်္ကျီနှင့်ဖိနပ်နဲ့ရေချိုးခန်း) တပ်ဆင်ထားနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်အသုံးပြုခွင့်ရှိသည်နေကြသည်။ ရှေ့စားပွဲခုံများနှင့်ဧည့်သည်များမှာ ROOM တွင်ဝန်ဆောင်မှုကိုလည်းအခမဲ့လေဆိပ်လွန်းကယ်မနှုတ်နိုင်။
Addissinia ဟိုတယ် (Addis Ababa) ။ လေဆိပ်ကနေ 8 မိနစ်မြို့တော်၏စိတ်နှလုံးထဲမှာတည်ရှိပါတယ်။ တစ်ဦးကို TV, Mini-bar ကိုတပ်ဆင်ထားလှပသောပရိဘောဂခန်း, လက်ဖက်ရည်နှင့်ကော်ဖီရှိပါတယ်။ ဧည့်သည်များ, တစ်ဦးကဖီး, ဘား, အခမဲ့လွန်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်ယာဉ်ရပ်နားနိုင်ငံတကာစားသောက်ဆိုင်သွားရောက်နိုင်ပါသည်။
ဟိုတယ် Kuriftu Resort & Spa Bahir Dar (Bahir Dar) ။ ကမ်းခြေပေါ်တွင်တည်ရှိပြီး ရေကန်တနိုင်း၏ ။ အဆိုပါဟိုတယ်ကို၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဆိပ်ခံတံတား, ကြီးစွာသောစားသောက်ဆိုင်နှင့်တစ်ဦးအလွန်ကောင်းစွာ-ဆောင်ဖို့ပိုင်နက်ရှိပါတယ်။ ဟိုတယ်အခန်းပေါင်းရိုးရာစတိုင်အလှဆင်နေကြတယ်, တစ်ဦးချင်းစီကအခန်းစပျစ်နွယ်ပင်နှင့်မီးဖိုနှင့်အတူအလှဆင်နေတဲ့လသာဆောင်, ရှိပါတယ်။ ဒီဟိုတယ်ကြီးတွေပေါင်းကုသတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားအကွာအဝေးနှင့်အတူတစ်ဦး spa စင်တာ၏ရှေ့မှောက်တွင်ဖြစ်ပါတယ်။
Delano ဟိုတယ် (Bahir Dar) ။ တီဗီ, ရေခဲသေတ္တာ, Mini-bar ကို, လေအေးပေးစက်အခမဲ့ Wi-Fi ကို - အလွန်ကြီးစွာသောတည်နေရာနှင့်သင်ကောင်းတစ်ဦးကြွင်းသောအရာများအတွက်လိုအပ်သမျှနှင့်အတူလှပသောကျယ်ဝန်းခန်းရှိပါတယ်။ အဆိုပါဟိုတယ်စားသောက်ဆိုင်, ဘား, spa, ပွဲနှင့်အစည်းအဝေးခန်းရှိပြီးခြောက်သွေ့သန့်ရှင်းရေး, ရေချိုးခန်း, အခမဲ့ယာဉ်ရပ်နား။
ဟိုတယ်3*
Caravan ဟိုတယ် (Addis Ababa) ။ တည်ရှိပြီး Bole အဘိဓါန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကနေ4ကီလိုမီတာနှင့် 15 မိနစ်ကနေမောင်း အမျိုးသားပြတိုက် ။ အဆိုပါဟိုတယ်အခန်းပေါင်းပုဂ္ဂလိကရေချိုးခန်း, ဆံပင်လေမှုတ်စက်, ရုပ်မြင်သံကြား, စားပွဲ, Mini-bar ကိုအခမဲ့ Wi-Fi ကိုရှိသည်။ နိုင်ငံတကာစားသောက်ဆိုင်နှင့်ဘား, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစင်တာ, ငွေကြေးလဲလှယ်, ကားပါကင်။ အဆိုပါဟိုတယ်ကိုလေဆိပ်နှင့်နောက်ကျောကနေအခမဲ့လွန်းဝန်ဆောင်မှုပေးထားပါတယ်။
Lobelia ဟိုတယ် (Addis Ababa) ။ ဒီဟိုတယ်အခန်းများတဲ့ TV, သေးငယ်တဲ့ရေခဲသေတ္တာ, လုံခြုံနှင့်ပုဂ္ဂလိကရေချိုးခန်းပါဝင်သည်။ ဧည့်သည်များပုဂ္ဂလိကယာဉ်ရပ်နားအများကြီးအတွက်ကားတစ်စီးရပ်အခမဲ့ Wi-Fi စားသောက်ဆိုင်, ကြံ့ခိုင်ရေးစင်တာ, ချွေးပေါင်းအိမ်ခံစားနိုင်။
ဟိုတယ် Harbe ဟိုတယ် (Lalibela) ။ ဒါဟာအဓိကဆွဲဆောင်မှုကနေပဲမိနစ်တွင်တည်ရှိသည်။ ဒီ Mini-ဟိုတယ်အတွက်ပရိဘောဂလသာဆောင်နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်အင်တာနက်နှင့်အတူ 16 ဧည့်ခန်းရှိပါတယ်။ ရေချိုးခန်းနှင့်ဆံပင်လေမှုတ်စက် - အခန်းများဂြိုဟ်တုရုပ်မြင်သံကြားစက်နှင့်ရေချိုးခန်းရှိသည်။ ဟိုတယ်များ၏မီးမောင်းထိုးပြ - ခေါင်မိုးကျန်ကြွင်း။ သင်ကဟိုတယ်မှာစားသောက်ဆိုင်၌စားသောက်ခြင်းသို့မဟုတ်အခန်းအစားအစာများ၏ဝန်ဆောင်မှုပေးအပ်ခြင်းကိုသုံးနိုင်သည်။ အဆင်ပြေဘို့, ဧည့်ခံနာရီဝန်းကျင်ပွင့်လင်းသည်အိတ်သိုလှောင်မှုနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်ယာဉ်ရပ်နားကိုယ်စားပြုသည်။
ဟိုတယ် Goha ဟိုတယ် (Gonder) ။ ဒါဟာမြို့လယ်တွင်တည်ရှိပေမယ့်သိသာအားသာချက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်သော Gondar စီးတီး, အပေါ်တစ်ဦးအံ့သြစရာမြင်ကွင်းကျယ်ရှိပါတယ်မပေးပါ။ အခန်းပေါင်းကျိုးနွံ, စားသောက်ဆိုင်တစ်ဦးပြင်ပရေကူးကန်တစ်ဘားအခမဲ့ယာဉ်ရပ်နားဖြစ်ကြသည်။
ဟိုတယ် AG ကဟိုတယ် Gondar (Gondar) ။ မွို့၌အနည်းငယ်ညနေဖို့နောက်ထပ်လျောက်ပတ် option ကို။ ဂရိတ်တည်နေရာ, သန့်ရှင်းအဆင်ပြေခန်း, ဖော်ရွေန်ထမ်း - ဟိုတယ်၏အဓိကအားသာချက်များ။ စားသောက်ဆိုင်နှင့်ဘား, ကြံ့ခိုင်ရေးစင်တာအခမဲ့ယာဉ်ရပ်နားနှင့်ကြိုးမဲ့အင်တာနက်ရှိပါသည်။
အာဖရိကကျေးရွာ ( Dawa ) ။ အာဖရိကကျေးရွာစိတ်ဝင်စားစရာအလှဆင်ခန်း, ကြီးမားတဲ့ကောင်းစွာ-ထားရှိမည်ဧရိယာ, ပိုက်ဆံများအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့တန်ဖိုးကိုပေးထားပါတယ်။ ဒါဟာစျေးကွက်ကနေပဲမီတာ 200 ရွာဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်အမြဲတမ်းအလွန်တိတ်ဆိတ်ခြင်းနှင့်ပျူငှါနွေးထွေးသောဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့အလတ်စားနှင့်မြင့်မားသောစျေးနှုန်းအကွာအဝေးသာဟိုတယ်များထည့်သွင်းစဉ်းစားပါပြီ။ ဒါဟာအီသီယိုးပီးများတွင်ဟိုတယ်များအများကြီး * 1-2 စုစုပေါင်းရှိသည်သတိပြုသင့်ပါတယ်။ တယောက်ကိုတယောက်မြို့မှပြောင်းရွှေ့နေချိန်တွင်ထိုကဲ့သို့သောနေအိမ်သို့ဥပမာ, သာရေတိုရေရှည်နေရာထိုင်ခင်းအဘို့ဒီဇိုင်းလုပ်ခဲ့တာပါ။ သည်အခြားကိစ္စများတွင်ကခရီးသွားဧည့်ဒေသများရှိ3* နှင့်နှစ်လိုဖွယ်ထက်မနည်းအမျိုးအစားများ၏ဟိုတယ်ရွေးချယ်ဖို့ သာ. ကောင်း၏။ ဒါကြောင့်ရေသို့မဟုတ်လျှပ်စစ်ဓါတ်အားအဘယ်သူမျှမနှင့်အတူအခန်းတခန်းတွင်နေထိုင်၏ဖြစ်နိုင်ခြေသိသိသာသာနိမ့်ကြလိမ့်မည်။
နမီးဘီးယား - စခန်းချနေထိုင်မည့်
အစားအသောက် "12 ရက်အတွင်း"
Provence ရဲ့ style အတွက်မီးဖိုချောင်များအတွက်နောက်ခံများ
ဇာထိုးဘို့ Openwork ပုံစံများ
အဆိုပါကတ္တရာစေး - လျှောက်လွှာ
Milkshake - နွေရာသီအချိုရည်များအတွက်အများဆုံးအရသာချက်ပြုတ်နည်းများ
Modular စက္ကူခေါက်ခြင်း - ခြင်းတောင်း
Cholecystitis - ရိုးရာကုစား၏ကုသမှု